फिलिप ह्यु: नयाँ आउटडोर बत्तीहरू घोषणा भइसकेका छन ग्याजेट समाचार
पहिलो आउटडोर फिलिप ह्यु पहिले नै घोषित भइसकेका छन्
ईडर एस्टेबान | | घर, हाम्रो बारेमा
निश्चित रूपमा तपाईं धेरैलाई फिलिप ह्यु लाइट्सको बारेमा थाहा छ। यो आजको सबैभन्दा लोकप्रिय घर बत्ती प्रणाली हो। त्यसैले डच कम्पनीले यो दायरा विस्तार गर्ने अवसर गुमाउन चाहँदैन। तसर्थ, आउटडोर ह्यू बल्बहरूको नयाँ दायराको घोषणा गर्नुहोस्। यी बल्बहरूले स्मार्ट गुणहरू र मौलिकको अपरेशन राख्नेछन्।
तर यस अवस्थामा ती घर बाहिर प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको हो। त्यसैले उपभोक्ताहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो बगैचामा वा उनीहरूको घरको प्रवेश द्वारमा राख्न चाहे उनीहरू चाहानुन्। थप, केहि थप विवरणहरू यी फिलिप ह्यु आउटडोरको बारेमा पहिले नै ज्ञात छ.
तिनीहरू विभिन्न मोडेलमा उपलब्ध हुनेछन्। तपाईं सेतो प्रकाश वा परिवेशको र with्गका मोडेलहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, फिलिप ह्यु लिली बगैंचाको लागि डिजाइन गरिएको एक नमूना हो। जबकि ह्यु Calla पथहरु प्रकाशित गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ। थप मोडेलहरू ब्राण्डको क्याटलगमा पनि आइपुग्छन्। किनकि हामी नयाँ नामहरू फेला पार्दछौं जस्तै लुक्का, लुडेरे, ट्युआर वा टुरको।
यी सबै मोडेलहरू घर बाहिर डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि उनीहरूले पूरा गर्ने कार्यहरू हालमा प्रकट गरिएको छैन। यो जस्तो देखिन्छ प्रत्येक मोडेल एक विशिष्ट कार्यको लागि डिजाइन गरिएको हो। कम्तिमा यो फिलिप्सले टिप्पणी गरेको छ।
उनीहरूको मूल्यहरूको बारेमा केहि पहिले नै थाहा छ। किनभने संयुक्त राज्य अमेरिकामा उनीहरूको मूल्यहरू के हुनेछन्। लाग्छ कि फिलिप ह्यु लिली सबै भन्दा महँगो हो,, २ 279,99। .XNUMX. मूल्य। अरुको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा कम छ। पछि ह्यु क्याला $ १२। .129,99। बाट उपलब्ध हुनेछ। जबकि बाँकी मोडेलहरूको $ ....। बाट खर्च हुनेछ।
भाग्यवस, केहि दिनमा हामी कम्पनीको नयाँ आउटडोर बत्तीहरूको बारेमा सबै कुरा जान्ने छौं। मार्च १ on मा प्रेस सम्मेलन हुनेछ। यसैले सबै कुराले संकेत गर्दछ कि यस दिन सबै कुरा प्रकट हुन्छ। बढीबाट प्रत्येक मोडेलको जानकारी, यसको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धतामा.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » पहिलो आउटडोर फिलिप ह्यु पहिले नै घोषित भइसकेका छन्
नेटफ्लिक्स चेतावनी दिन्छ, निन्टेन्डोको कारण यसको अनुप्रयोग स्विचमा उपलब्ध छैन